Tsy lany ny tetibolam-panjakana 2019: tsy maintsy hitsivolana ny fampiasana volam-panjakana | NewsMada
Tsy lany ny tetibolam-panjakana 2019: tsy maintsy hitsivolana ny fampiasana volam-panjakana
Nampandalovina tao amin’ny Antenimiera roa tonta ny tetibolam-panjakana 2019, saingy tsy tafavoaka teo anivon’ny Antenimieran-doholona. Nandalo tao amin’ny Antenimieram-pirenena aloha izany ary nanao fanitsiana ry zareo, izay azony atao tsara, araka ny lalàna ; avy eo nampiakarina tany amin’ny Antenimieran-doholona, nitsapaka izany ary nitondrana fanitsiana koa ry zareo. Naverina tany amin’ny Antenimieram-pirenena izany, novakina fanindroany, ary mbola nanaovany fanitsiana ihany koa nialoha ny namerenana azy tany amin’ny Antenimierandoholona, mbola nitsipaka izany hatramin’ny farany.
« Araka izany, rehefa nivezivezy teo anivon’ny Antenimiera roa ireo ny tetibolam-panjakana nefa tapitra ny fe-potoana fankatoavana azy, dia tsy misy tetibola azo ampiharina. Noho izany tsy maintsy mamoaka hitsivolana ny fanjakana mialoha ny faran’ny taona, handoavana ny karaman’ny mpiasam-panjakana, hampidirana ny volam-panjakana sy mampihodina ny raharaham-panjakana », hoy ny minisitra Andriambololona Vonintsalama.
Ny filohan’ny Repoblika no mamoaka izay hitsivolana izay, araka ny fanitsiana hitany fa azo raisina, nataon’ny Antenimiera roa tonta. “Afaka manamboatra tetibola hasiam-panitsiana koa ny filohan’ny Repoblika raha hitany fa tsy mifanaraka amin’ny fandaharanasany ilay tetibola teo aloha”, raha ny fanazavan’ny minisitra.
“Tsy bokan-trosa isika …”
Nasian’ny minisitra teny ny momba ny trosan’i Madagasikara, mahatratra 2 900 miliara dolara amin’izao fotoana izao. “Azo lazaina fa tsy bokan-trosa isika raha io tarehimarika io, manome 29 % amin’ny harinkarena faobe eto Madagasikara. Ny any amin’ny firenena mandroso tandrefana sasany efa mahatratra 100 % amin’ny harinkarena faobe any aminy ny trosany, ohatra tany Grèce, nahatonga ireny krizy ireny”, hoy ny minisitra.
Na izany aza, tsy azo atao fahatany ny mindram-bola fotsiny, satria hoe mbola kely ny trosantsika raha oharina amin’ny harinkarena faobe. Tsy maintsy zahana ny fahafahana mamerina izany trosa izany, ny vola miditra amin’ny fanjakana. “Koa raha io 2 900 miliara dolara io, afaka mamerina izany tsara sy ara-potoana isika, raha mandeha araka ny tokony ho izy ny toekarena”, hoy ihany ny minisitra. Miankina amin’ny politika izany fa matetika io politika io no manimba ny fihariana eto amin’ny firenena.